Shamwari yangu Stella - Vanoda Zvinhu
Stella yaive shamwari yangu. Akange atevera murume kuLondon ndokuwana aane mumwe mukadzi, akadzoka aine stress vakuru ndikamupa hangu a shoulder 2 cry on…..
Ndakashockwa pandakanzwa kuti akange aita 1 yr 6months asina kumbosampler mboro. Ndakamupromisa mboro zvakasimba tiichiita hedu nyaya pawhatsapp. Akanditi aida kuti ndizomutora paairport ndoenda naye straight kulodge kunomusvira. Musi waakauya ndege yakasvika huri husiku and ndainge ndakatomirira kumupicka nekuenda naye kunomusvira…….
Tichingopinda mulodge ndakavhara mawindow, ndaakuvhara door akandimbundira nekusri kwangu ndokundivhura zip achibva andiburitsa mboro ndokutanga kuibonyorabonyora achitambisa machende. Mwana aitoda mboro kwete zvekutamba. Ndakatendeuka ndokumupa kiss achibva anditora rwoko ndokupinza muskirt make. Ndakapinza rwoko mupanty make ndokunzwa beche ratotota jakwa chakwa chairo. Takabvisana hembe ndokurara pabed kuti andiyamwe mboro…..
Akatanga kundinanzva kaburi kepamusoro kemboro kaye apo achitambisa machende. Ndaive ndakarara nemanhede samakanika mwana akapfugama paside pangu akaisa mhata mudenga. Akazoisa mboro mukanwa ndokutanga kuiyamwa nyce n slow. Aiti akambosvisvina chimusoro odzika ombonanzva kamutsetse kari pakati pemachende. Aizoidzorera mukanwa oirova deep throat ini ndichi bararadza hangu nekunakirwa. Mwana akatanga kutambisa mhata achiyamwa mboro achiita kasound kekuti mmmmmmm ndobva ndaziva kuti arikunakirwa nekuyamwa. Ndakamuisa chigunwe mubeche ndokumusvira nacho iye achiyamwa hake. Akatunda katatu kese nekuiswa chigunwe pamwe nekuyamwa mboro……..
Ndakamuradzika pa edge pebed akatarisa mudenga ini ndokuuya nekumusoro kwake ndokumuisa mboro zvakare mukanwa ini ndichibva ndauya pamusoro pake ndokutanga kumudya beche. Ndakamusimudza ndokutanga kumudya beche ndakamira iye ari upside down achisvisvina jende kunge richaputika. Ndakazomuisa pasi ndokumuradzika nemanhede ndokuisa makumbo ake pashoulder rangu ndichibva ndanyudza mboro mubeche rake nyce n slow. Iye aive pacorner pebed ini ndakatsika pasi mboro yakapinda yese nemachende. Ndakasvira mwana kwekanguva akachemerera kunge aakubaiwa nebanga. Ndakanzwa beche remwana raakugwina mboro ndikaziva kuti shasha yatunda…..